Pyuthan Khabar | शान्ति सुरक्षासँगै प्युठान प्रहरीको अभियान : तपाइको मास्क खै ? - Pyuthan Khabar शान्ति सुरक्षासँगै प्युठान प्रहरीको अभियान : तपाइको मास्क खै ? - Pyuthan Khabar
प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण २९, बिहीबार
प्युठान खवर । यतिबेला कोभिड-१९ को संक्रमण सन्त्रास र जोखिम सबैले ब्योहोर्नुपरेको छ । कोभिड संक्रमण सर्वसाधारण देखि उच्च पदमा रहेकाहरुलाइ पनि नहुने भन्ने होइन । संक्रमणका खबर आइनै रहेका हुन्छन । उसो त प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने हो । सामाजिक रुपमा जहाँतहि जानुपर्ने हुँदा प्रहरीलाइ पनि यो रोगले नभेट्ने भने होइन । तर प्युठानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले आफू सचेत रहँदै अरुलाइ पनि सचेत गराउने अभियान चलाइरहेको छ ।
सहयोगि र सौजन्यबाट प्राप्त मास्क बितरण गर्दै प्रहरीले तपाइको मास्क खै ? भन्ने अभियान चलाइरहेको छ । लकडाउनको अवधिमा मास्क नलगाइ हिड्नेलाइ प्रहरीबाट कार्वाही हुन्थ्यो । अहिले लकडाउन केहि खुकुलो भएकाले सर्वसाधारणले मास्क नलगाइ बाटोमा हिड्न थालेपछी प्रहरीले यस्तो अभियान थालेको प्रहरी नायव उपरिक्षक नरेन्द्र कुमार कार्किले बताउनुभयो । “प्रहरी देख्दा मात्रै मास्क लगाउने प्रचलन बढ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “गाली पनि नगरौ, कार्वाहि पनि नगरौ तर सभ्य भएर सचेत गराउँ” ।
जिल्लाका मुख्य बजार केन्द्रमा बजार गर्न आउनेहरु हुन वा छोटो तथा लामो दुरीमा यात्रा गर्ने यात्रु हुन सबैलाइ एउटै प्रश्न छ तपाइको मास्क खै ? मास्क नलगाई घर बाहिर हिड्ने नागरिकलाई कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गर्दै आएको हो । संक्रमणबाट बच्न नागरिक आफै नै सचेत हुनु पर्ने भन्दै कोरोना विरुद्धको नारा समेटिएको प्लेकार्ड बोकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका प्रनाउ नरेन्द्र कुमार कार्की सहितको प्रहरी टोली सडकमा निस्किरहेको हप्तौ हुन लाग्यो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठान अन्र्तगत समुदाय –प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत जिल्लाका स्थानीय तह, विभिन्न संघसंस्था र व्यवसायीहरुको सहकार्यमा यो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । मास्क नलगाई हिड्ने जो कोही व्यक्तिलाई ‘तपाईको मास्क खै ?’ भन्दै सोध्नुका साथै मास्क समेत वितरण गर्ने गरिदै आएको प्युठान प्रहरी प्रमुख कार्की बताउनुहुन्छ । कोरोना भइरसबाट जोगिनका लागि मास्क अनिवार्य रहेकाले मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिदैं मास्क वितरण गर्ने गरिएको उहाँको भनाई छ ।
प्युठानमा पहिलो पटक प्युठान नगरपालिका वडा नं ४ विजुवार भौकामा भण्डारी परिवारसंग सहकार्य गरी यो अभियानको थालनी गरिएको हो । कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउने मुख्य उदेश्य सहित अभियानलाई जिल्लाका २४ वटा प्रहरी युनिटहरुले विभिन्न निकायसंग समन्वय गरी सञ्चालन गरिने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । भौतिक दुरी कायम राख्नुका साथै घर बाहिर निस्किदा माक्सको प्रयोग गरि आफु र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्न प्युठान प्रहरीले सबैलाइ अनुरोध गर्दै आएको छ ।
हामिले प्रकाशन गरेका समाचारमा तपाइका कुनै जिज्ञासा वा सुझाव छन भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला हो वा pyuthankhabar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ ।